Ahoana ny fomba hamoronana maso kely | Bezzia
Ahoana ny fomba hamoronana maso kely
Susana Garcia | | beauty, Maquillaje
Raha manana ny maso kely dia azo antoka fa te-hamorona fiheverana fa lehibe kokoa izy ireo, zavatra azo antoka fa azo atao amin'ny makiazy. Raha misy zavatra tsara momba ny makiazy dia mamela antsika hanarona na hanafina kileman-toetra sasany izy ary hanatsara ny faritra hafa amin'ny tarehy amin'ny fikasihana, loko ary hafetsena ihany. Ka andao hojerentsika ny fomba fananganana maso kely, karazan-maso tsy maintsy mihalehibe.
ny maso kely dia afaka ny ho lasa mpilalao fototra ny makiazy koa. Amin'izao fotoana izao dia azo ovaina ireo fiasa raha haintsika ny manao azy, manasongadina ny tsara izay eo amin'ny tarehy. Amin'ity tranga ity, misy fikafika vitsivitsy izay afaka manampy anao hampiseho ny masonao ho lehibe kokoa amin'ny alàlan'ny fampiasana makiazy amin'ny fomba mety.
1 Manazava manodidina ny maso
2 Aza atao aloka mainty na matte
3 Mampiasà alokaloka maivana
5 Tsipika rano madio
6 Asongadino ny volomasonao
Manazava manodidina ny maso
Mba hanasongadinana ny maso kely dia tsy ny makiazy ampiasaintsika azy fotsiny no zava-dehibe fa ny makiazy ampiasaintsika amin'ny tarehy manodidina ny masontsika, satria manampy azy ireo hampiavaka azy ireo. Tokony hampiasa fanafenana ao amin'ny faritry ny faribolana maizina ianao mba hanazavana ity ampahany ity ary hanitatra ny vokatr'ilay maso makiazy. ny ireo mpanazava koa dia manampy antsika hanome hazavana bebe kokoa amin'ity faritra ity hisarika ny sain'ny maso. Ireo dingana ireo dia tokony horaisina alohan'ny hanombohana makiazy amin'ny maso, satria izy ireo dia fototra.
Aza atao aloka mainty na matte
Ny ataon'ity karazana aloka ity dia ny mahatonga ny maso ho kely kokoa. Ny tonony matte dia manaisotra ny famirapiratana ary noho izany dia tsy manitatra ny faritra, noho izany dia tsara kokoa ny mampiasa aloka izay misy vokany iridescent na metaly, mba hanome taratra ny hazavana ary hampisongadina ny maso, hampitombo azy. Ary ny aloka maizina koa mahatonga ny maso hiseho ho kely kokoa. Amin'izao fotoana izao, ireo maso feno setroka feno aloka mainty ho an'ny alina dia tavela any aoriana, satria ny endrika misokatra sy malalaka indrindra no tadiavina, miaraka amin'ny aloka izay miasa andro aman'alina.
Mampiasà alokaloka maivana
Sady amin'ny faritra ambony no ao amin'ny any ambany dia tokony hampiasa feo maivana sy miboridana ianao. Ireo karazana alokaloka ao amin'ny aloka ireo dia manampy ny maso hijery malalaka kokoa. Raha manana taratra hamirapiratra koa izy ireo, dia hanana alokaloka tsara indrindra ianao hampisehoana ny masonao bebe kokoa. Hevitra tsara ny fampiasana ireo aloka ireo amin'ny ampahany amin'ny hodi-maso finday fa koa amin'ny faritra ambany, hanitarana ny maso.
El eyeliner dia azo ampiasaina hanehoana ny halavan'ny maso. Mampiasaha tsipika tsara amin'ny mainty ary azonao ampiasaina ity kilalao makiazy tsara ity. Aleo atao raha tsy misy azy eo ambany, fa eo an-tampony dia misy tsipika manify izay manalava amin'ny farany dia hampiseho ny maso misaromotra sy lehibe kokoa. Mazava ho azy fa ny fanaovana tsipika tsara dia mila fampiharana sy eyeliner tsara, saingy tsara ny vokany.
Tsipika rano madio
Ny tsipika rano dia ny tapany ambany amin'ny maso, io faritra io izay nolokoana mainty matetika tamin'ny eyeliner. Na izany aza, tsy lamaody intsony izao ary mahatonga ny maso hiseho ho kely kokoa ihany koa. Ny hafetsen'ny maso efa madinidinika ary te hampitombo dia ny fandokoana an'ity tsipika ity eyeliner fotsy, malina ary mahombyrehefa manitatra ny maso izy.
Asongadino ny volomasonao
Tsy zava-dehibe fotsiny ny fanasongadinana ny maso, fa ny volomaso koa, satria ireo dia manampy amin'ny famolavolana endrika ary hametraka zanabola amin'izany. Ny faritra volomaso dia ampahany mampiavaka ny maso koa. Raha voafaritra tsara izy ireo, dia manaisotra ny mason'izy ireo ary mampiavaka ny makiazy, miaraka daholo, mba hampisehoana ny maso ho lehibe kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Ahoana ny fomba hamoronana maso kely
Voanjo fotsy sy voatavo tsaramaso miaraka amin'ny voatabia
Fampiofanana miasa, inona izy io ary ahoana no fomba anaovanao azy ao an-trano